सरकारी सेवामा पहिलो, दोस्रोमा नाम निकालेपछि बिहे गरेका जोडीको २ बर्ष नवित्दै सम्बन्ध बि’च्छे’द ! – AB Sansar
December 10, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on सरकारी सेवामा पहिलो, दोस्रोमा नाम निकालेपछि बिहे गरेका जोडीको २ बर्ष नवित्दै सम्बन्ध बि’च्छे’द !
काठमाडौं । भारतमा एक जोडीको सम्बन्ध वि’च्छे’दलाई लिएर चर्चा सुरु भएको छ । सन् २०१५ मा यूपीएससीमा शीर्ष स्थान पाएका भारतिय प्रशासकीय सेवा (आईएएस) अधिकारी टीना डाबी र उनका आईएएस पति अतहर खानले जयपुरको परिवार अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको लागि मुद्दा दायर गरेका थिए । *** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
दुवैले आपसी सहमतिबाट यो सम्बन्ध वि:च्छे”द गर्ने निर्णय गरेका हुन् । उनीहरूको सन् २०१८ मा विवाह भएको थियो । अतहर कश्मीरी परिवारका हुन् । जब टीना यूपीएससीको प्रथम बनिन्, त्यस बर्ष अतहर दोस्रो स्थानमा थिए । भनिन्छ कि टीना र अतहर प्रशिक्षणको क्रममा एक अर्काको नजिक आए र विवाह गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
दुबै राजस्थान क्याडरका अधिकारीहरु हुन् । उनीहरुको जयपुरमा पोष्टिङ्ग गरिएको छ । टीनाले केही समय अगाडि उनको सामाजिक सञ्जालमा भएका खातामा खानको उपनाम हटाएकी थिइन । यस पछि, अतहरले इन्स्टाग्राममा टीनालाई अनफलो पनि गर्दिएका थिए । त्यसबेलादेखि उनीहरूको विवाहको बारेमा विभिन्न चर्चाहरु भइरहेका थिए । सन् २०१८ देखि दुबैको विवाह चलिरहेको थियो । आईएएस दम्पतीलाई धेरै राजनीतिज्ञहरूले बधाई दिएका थिए । जबकि, हिन्दू महासभाले यस विवाहलाई प्रेम जिहाद भनेको थियो । टीना डाबीको परिवार मूल रूपमा जयपुरका हुन् । यद्यपि उनको जन्म भोपालमा भएको थियो ।
छिमेकीको ह`त्या गरी मु`टु निकालियो, आलुसँगै पकाएर परिवारले खाए